မတူတဲ့ဘဝတှေ လောကမှာ အမြားကွီးရှိနပေါသေးတယျ – Shinyoon
ဘဝတှေ . . .မတူတဲ့ဘဝတှေ လောကမှာ အမြားကွီးရှိနပေါသေးတယျ သငျမသိသေးတဲ့ သငျမမွငျနိုငျသေးတဲ့ ဘဝတှလေဲ အမြားကွီးပါသေးတယျ ။ ဒါကို သငျလကျခံတယျဆိုရငျ လူတိုငျးကို ကိုယျ့ဘ၀နဲ့ နှိုငျးပွီး ကိုယျ့မှာ ရှိတဲ့ ပတေံလေးနဲ့တိုငျးပွီး ရှုံ့ခတြာမြိုး အပုတျခတြာမြိုးမလုပျနဲ့ ။
အပျေါယံလေးကို မွငျပွီးပဲ အရာရာကို ဆုံးဖွတျပဈလိုကျလို့မရဘူး ။ တခြို့က အပျေါယံလေးက သိပျလှတယျ ဒါပမေယျ့ စိတျဓာတျတှကေကြ ပုတျပှနတေတျတာမြိုးလေ ။ အပျေါယံတှထေဲမှာ အ၀တျအစား အဆငျအယငျတှလေဲ ပါတယျ ။ လူကို ကွညျ့ရငျ မငျသား ရှုံးတယျ မငျးသမီးရှုံးအောငျ ပွငျတယျ ဆငျတယျ ။ ကိုယျ့အခွအေနမှေနျကို ကိုယျ လကျခံရဲတဲ့ ဥာဏျကတြော့ မရှိဘူး ။ တဲစုတျလေးနဲ့ နရေတော့ကော ရှကျစရာလား ။ မရှိတာကို အရှိတှလေုပျပွီး မသိအောငျ ဖုံးဖို့ကွိုးစားကွတဲ့လူတှေ အမြားကွီးပါ ။ သိနျးကြျောတနျ ဆလငျးဘတျကွီးကိုငျပွီး အိတျထဲမှာအပေါငျစာရှကျတဲ့ကွီးပဲ ရှိနတေဲ့လူတှမှေ ကိုယျ့ဘေးနားမှာ အမြားကွီးပဲ ။ ၀မရှိပဲ ဝိလုပျဖို့ကွိုးစားနကွေတဲ့သူတှပေေါ့ ။
လူတှကေလဲ ခကျတယျ အဲ့လိုလူမြိုးတှကေိုမှ အပေါငျးအသငျးလုပျပွီး ယုံကွညျခငျြကွတာလေ . .. နောကျဆုံး ဖှတျထှကျမှ တောငျပို့မှနျးသိကွတာမြိုးပေါ့ . အဲ့လိုအခြိနျမြိုးမှတော့ နောငျတတှကေ လှဲလို့ဘာမှ ရှိလာတော့မှာမဟုတျဘူး ။
လောကမှာ . . .ရိုးသားတဲ့သူတှကေ နရောမရတတျကွဘူးတဲ့ အဲ့လိုလဲ တဈယူသနျမတှေးပါနဲ့ ကိုယျရိုးသားပါတယျလို့ဘယျသူ့ကိုမှ ကွငွောပွနစေရာမလိုဘူး ကိုယျ့လိပျပွာကိုယျလုံနရေငျကို ဖွဈပါတယျ ။ ခိုးမစားဘူး ဝှကျမစားဘူး သမာအာဇီဝကကြ စီးပှားရှာနတေဲ့ လူတှမှေ အမြားကွီးပါ အဲ့လိုလူမြိုးတှကေို အားပေးဖို့ကွိုးစားခဲ့ဖူးလား ရပါတယျ အားမပေးခငျြနပေါ မရှုပျခပြါနဲ့ လူတိုငျးက သူ့ကံနဲ့ သူ ကံလာတယျဆိုပမေယျ့ တခြို့တှကေ ဖွဈခငျြလို့ဖွဈလာရတဲ့ ဘဝတှမေဟုတျပဲ မဖွဈခငျြပဲ ရှောငျလှဲခှငျ့မရခဲ့တဲ့ကံကွောငျ့ မနိမျ့ကခြငျြပါပဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နိမျ့ခပြဈလိုကျရတဲ့ ဘဝတှလေဲ ရှိပါတယျ
ဒီစာကို ဖတျပွီးသှားတဲ့အခါ . . .လမျးဘေးက စြေးရောငျးနတေဲ့ ကလေးငယျလေးကို နှာခေါငျးမရှုံ့နဲ့တော့ . . . ကိုယျဝယျခငျြစိတျရှိတဲ့အခါ ၀ယျပေးလိုကျ ကိုယျမ၀ယျခငျြတဲ့အခါ မကျြနှာလှဲနပေေးလိုကျ အကုသိုလျမဖွဈတော့ဘူး ။
ဒီစာကို ဖတျပွီးသှားတဲ့ . . .ရပျကှကျထဲက အမကေိုပဈထားပွီး မငျးသမီးရှုံးအောငျ ပွငျတတျတဲ့ကလေးမလေးအကွောငျးလဲ မပွောနဲ့တော့ သူ့ဘ၀နဲ့သူ ကိုယျ့ဘ၀နဲ့ ကိုယျဘဝလေ ။ အလကား အကုသိုလျတှမေယူနဲ့တော့ ။ ပွီးတော့လူတဈယောကျကို အပျေါယံလေးကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျတတျတဲ့အကငျြ့လေးကိုတော့ ရအောငျပွငျပါ ။ ယုံကွညျမှုဆိုတာ . . လူတိုငျးနဲ့ မထိုကျတတျသလို ကိုယျ့စကားတဈခှနျးကွောငျ့ တဈဖကျသား ထိခိုကျနဈနာသှားရတာမြိုးလဲ မကောငျးဘူး ။
ဘဝတွေ . . .မတူတဲ့ဘဝတွေ လောကမှာ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ် သင်မသိသေးတဲ့ သင်မမြင်နိုင်သေးတဲ့ ဘဝတွေလဲ အများကြီးပါသေးတယ် ။ ဒါကို သင်လက်ခံတယ်ဆိုရင် လူတိုင်းကို ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ နှိုင်းပြီး ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ပေတံလေးနဲ့တိုင်းပြီး ရှုံ့ချတာမျိုး အပုတ်ချတာမျိုးမလုပ်နဲ့ ။
အပေါ်ယံလေးကို မြင်ပြီးပဲ အရာရာကို ဆုံးဖြတ်ပစ်လိုက်လို့မရဘူး ။ တချို့က အပေါ်ယံလေးက သိပ်လှတယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်တွေကကျ ပုတ်ပွနေတတ်တာမျိုးလေ ။ အပေါ်ယံတွေထဲမှာ အ၀တ်အစား အဆင်အယင်တွေလဲ ပါတယ် ။ လူကို ကြည့်ရင် မင်သား ရှုံးတယ် မင်းသမီးရှုံးအောင် ပြင်တယ် ဆင်တယ် ။ ကိုယ့်အခြေအနေမှန်ကို ကိုယ် လက်ခံရဲတဲ့ ဥာဏ်ကျတော့ မရှိဘူး ။ တဲစုတ်လေးနဲ့ နေရတော့ကော ရှက်စရာလား ။ မရှိတာကို အရှိတွေလုပ်ပြီး မသိအောင် ဖုံးဖို့ကြိုးစားကြတဲ့လူတွေ အများကြီးပါ ။ သိန်းကျော်တန် ဆလင်းဘတ်ကြီးကိုင်ပြီး အိတ်ထဲမှာအပေါင်စာရွက်တဲ့ကြီးပဲ ရှိနေတဲ့လူတွေမှ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ အများကြီးပဲ ။ ၀မရှိပဲ ဝိလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေပေါ့ ။
လူတွေကလဲ ခက်တယ် အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုမှ အပေါင်းအသင်းလုပ်ပြီး ယုံကြည်ချင်ကြတာလေ . .. နောက်ဆုံး ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်းသိကြတာမျိုးပေါ့ . အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှတော့ နောင်တတွေက လွဲလို့ဘာမှ ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ဘူး ။
လောကမှာ . . .ရိုးသားတဲ့သူတွေက နေရာမရတတ်ကြဘူးတဲ့ အဲ့လိုလဲ တစ်ယူသန်မတွေးပါနဲ့ ကိုယ်ရိုးသားပါတယ်လို့ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြေငြာပြနေစရာမလိုဘူး ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံနေရင်ကို ဖြစ်ပါတယ် ။ ခိုးမစားဘူး ဝှက်မစားဘူး သမာအာဇီဝကျကျ စီးပွားရှာနေတဲ့ လူတွေမှ အများကြီးပါ အဲ့လိုလူမျိုးတွေကို အားပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးလား ရပါတယ် အားမပေးချင်နေပါ မရှုပ်ချပါနဲ့ လူတိုင်းက သူ့ကံနဲ့ သူ ကံလာတယ်ဆိုပေမယ့် တချို့တွေက ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာရတဲ့ ဘဝတွေမဟုတ်ပဲ မဖြစ်ချင်ပဲ ရှောင်လွဲခွင့်မရခဲ့တဲ့ကံကြောင့် မနိမ့်ကျချင်ပါပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နိမ့်ချပစ်လိုက်ရတဲ့ ဘဝတွေလဲ ရှိပါတယ်
ဒီစာကို ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ . . .လမ်းဘေးက ဈေးရောင်းနေတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို နှာခေါင်းမရှုံ့နဲ့တော့ . . . ကိုယ်ဝယ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့အခါ ၀ယ်ပေးလိုက် ကိုယ်မ၀ယ်ချင်တဲ့အခါ မျက်နှာလွဲနေပေးလိုက် အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူး ။
ဒီစာကို ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ . . .ရပ်ကွက်ထဲက အမေကိုပစ်ထားပြီး မင်းသမီးရှုံးအောင် ပြင်တတ်တဲ့ကလေးမလေးအကြောင်းလဲ မပြောနဲ့တော့ သူ့ဘ၀နဲ့သူ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ကိုယ်ဘဝလေ ။ အလကား အကုသိုလ်တွေမယူနဲ့တော့ ။ ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုတော့ ရအောင်ပြင်ပါ ။ ယုံကြည်မှုဆိုတာ . . လူတိုင်းနဲ့ မထိုက်တတ်သလို ကိုယ့်စကားတစ်ခွန်းကြောင့် တစ်ဖက်သား ထိခိုက်နစ်နာသွားရတာမျိုးလဲ မကောင်းဘူး ။
မမှားပဲနဲ့လဲ တောငျးပနျခဲ့ဖူးပါတယျ ။